မိုးကျ ဒီမိုကရေစီ (သို့မဟုတ်) အပေါ်က ချပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ – မောင်ညွန့် (မင်းကျောင်းတိုက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » မိုးကျ ဒီမိုကရေစီ (သို့မဟုတ်) အပေါ်က ချပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ – မောင်ညွန့် (မင်းကျောင်းတိုက်)
မိုးကျ ဒီမိုကရေစီ (သို့မဟုတ်) အပေါ်က ချပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ – မောင်ညွန့် (မင်းကျောင်းတိုက်)
Posted by kai on Aug 5, 2011 in Politics, Issues, Think Tank | 12 comments
အောက်ကစာတွေက.. ဒီမှာတင်ခဲ့တဲ့..” စောက်ချိုးတွေ ပြင်၊ ဒါပဲ…”
ရွာသားတွေဖတ်သင့်တယ်ထင်လို့… စာကလည်း.. တွေးခေါ်ဆွေးနွေးတာ.. သီးသန့်ဖြစ်နေတာမို့.. ပို့စ်ခွဲလိုက်တာပါပဲ..။
ကျနော် ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လက ရေးပြီး သိပ်မပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတောင် ဖတ်သူနည်းတဲ့ လစဉ်ထုတ် သတင်းစာ ဆောင်းပါးဟောင်းကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဆောင်းပါးဟောင်း ငါးပုဒ်လောက် တင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျနော် ဒီ/ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စု၊ ဦးဝင်းတင်တို့ကို ဝေဖန်တာ ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အလွန်လေးစားထိုက်သူတွေဖြစ်တာနဲ့ သူတို့လုပ်သမျှ အားလုံးထောက်ခံရမယ်၊ ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ ကျနော်ဟာ စက်ရုပ်မဟုတ်သလို ကိုယ်တိုင်လဲ ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် မထောက်ခံနိုင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်ပြီး ဝေဖန်စရာရှိရင် ဘယ်သူ့မဆို ဝေဖန်ပါတယ်။ အောက်က ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်ပြီး၊ အချက်အလက်နဲ့ တုန့်ပြန်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းပါ။
တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ ၁၉၇၂ က ယူရှင်ကော၊ ပီနိုချေးရဲ့ ၁၉၈၀ က ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကော ဘယ်သူမှ ပြင်ဆင်ခွင့်မရကြသလိုပါပဲ၊ မြန်မာပြည်မှာလဲ ဘယ်သူမှ ပြင်ဆင်ခွင့် မရပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ စစ်တပ်က သိပ်ကို အင်အားသာလွန်နေလို့ပါပဲ။ သူတို့ဆီမှာလဲ အတိုက်အခံတွေဟာ ပထမတော့ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာပါပဲ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေ တခြိမ့်ခြိမ့်နဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနည်းတွေက ပန်းတိုင်ကို မဆောင်ကျဉ်း ပေးနိုင်တာကို သဘောပေါက် သုံးသပ်မိကြတဲ့အခါကြတော့ နောက်ဆုံးမှာ အာဏာရှင်တွေ စိတ်ကြိုက်ရေးထားတဲ့ဟာကိုပဲ သဘောတူလိုက်ကြရတယ် (Patras & Leiva, 1988)။ ယူရှင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပတ်ချုံဟီးက လွှတ်တော်အမတ်စုစုပေါင်းရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို ခန့်ပါတယ်။ ဘရာဇီးဆိုရင် အဲဒီလောက် ဝေပုံကျနှုန်းကို နှစ်အနည်းငယ် နောက်ကျပြီးမှ ရကြပါတယ် (Dominguez, 2002)။ အင်ဒိုနီးရှားမှာက ဆူဟာတိုက အမတ် ၁၀၀ ခန့်ပြီး၊ စစ်တပ်ပါတီက ၆၀% ကျော် အရွေးခံရအောင် လုပ်ထားတယ်၊ ချီလီမှာကတော့ ပီနိုချေးကို ရာသက်ပန် အမတ်အဖြစ် ပေးရတဲ့အပြင် သူ ကြိုက်တဲ့သူ ၉ ဦးကို ဆီးနိတ်အမတ်ခန့်ခွင့် ပေးရတယ်။ ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ စစ်တပ်က သဘောမတူတဲ့အချက်ကို မပြင်ဆင်ပါဘူးဆိုတဲ့ နားလည်မှုကို ပေးခဲ့ရတယ် (O’Donnel & Schmitter, 1986)။
အင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ တပွဲထိုး အောင်ပွဲရအောင် ဦးဆောင်ရတာက လွယ်ကောင်းလွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိနှိပ်အား ပြင်းလွန်းလှတဲ့ ရန်သူကို နှစ်ကာလရှည် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရာမှာ နောက်လိုက်အဖွဲ့ဝင်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းရတာဟာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတာဝန်တွေကို ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ မူပေါ်မှာ ကြံ့ကြံ့ခံရင်း ရပ်တည်နေတယ်။ လူထုအ ပေါ်မှာ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာနဲ့ ရပ်တည်နေတယ်။
လူထုရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရည်မှန်းအချက်အပေါ်မမှိတ်မသုံယုံကြည်မှုကိုအချက်များစွာက သက်သေပြနေ တယ်။ စစ်အုပ်စုဟာ တိုင်းပြည်အနှံ့မှာ ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ထောက်လှန်းရေးယန္တယားတွေက တဆင့်ဒီအချက်ကိုသိနေ တယ်။ ဒါကြောင့်ဒေါ်စုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ပြီး မျက်စိဒေါက်ထောက် စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ဒီပိန်ပါးပါး အမျိုးသမီးတယောက်ကို အရေးတယူပြုစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ သွားချင်ရာသွား၊ လုပ် ချင်ရာလုပ် လွှတ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။
( ရဲဘော်သံချောင်း )
ဒီကနေ့အခြေအနေဟာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်က အောင်ပွဲကို အရောက်မလှမ်းနိုင်သေးသလို အာဏာရှင်များ ဘက်လည်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို အပြီးသတ် မချေမုန်းနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်တယ်။ အာဏာကိုဆုပ်ကိုင် ထားတဲ့ လက်တဆုပ်စာ အာဏာရှင်တွေ လူထုတိုက်ပွဲတွေကို အနှစ်(၂၀) ကြာတဲ့အထိ အပြီးသတ် မချေမုန်းနိုင်တာက လည်း တနည်းအားဖြင့် သူ့ရဲ့အရှုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ၊ အာဏာ၊ ဘဏ္ဍာစတဲ့ ယန္တယားလက်နက် တွေကို ကိုင်တွယ်အသုံးချပြီး နှိမ်နင်းတဲ့ ကြားက လူထုရဲ့ ဆန့်ကျင်အာခံမှုတွေကို အေးငြိမ်းသွားအောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ အဖြစ်ပါ။ လက်နက်နဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေက လက်နက်မဲ့ အုပ်ချုပ်ခံတွေကို အနှစ်(၂၀)ကျော် အစွမ်းကုန်ဖိနှိပ်တဲ့အကြားက အာခံမှုတွေ ဆက်လက်ရှိနေသေးတာဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အရှုံးလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
(၁၉၉၅) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကစလို့ စစ်အုပ်စုရဲ့ ပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေး အာဏာစက်ဟာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာ တယ်။ နိုင်ငံတကာမှာကတော့ ဆိုစရာတောင် မရှိဘူး။ နောက်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖျက်သိမ်းဖို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ဖို့ ဆိုတာတောင် မလုပ်နိုင်၊ မလုပ်ရဲတဲ့ အခြေအနေဖြစ်တယ်။ ဒီလို စစ်အုပ်စုရဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာစက်တွေ ယုတ်လျော့ကျဆင်းလာတာဟာ ပြည်တွင်း လူထုတိုက်ပွဲတွေကို အာရုံစိုက် နေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုရဲ့ တိုက်ပွဲဝင် စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD၊ CRPP နဲ့ (၈၈) ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး မူအပေါ် မှာ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
ဟိုအော်ဒီပြောလုပ်ရင်းနဲ. ပေးတာယူကျွေးတာစားဘ၀ နဲ. ရောင်.ရဲလိုက်ကြရတော.မှာပါ
စစ်အစိုးရနဲ. ဒီချုပ်အပါဝင်အတိုက်အခံတွေကြားကနေ တတိယလှိုင်းဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ.
“ပြည်သူတွေထဲက နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူတွေကလဲ ပြည်သူ့အကျိုးကို ပါတီအကျိုးထက်၊ ကိုယ့်အတ္တထက် ပိုပြီးထားကြဖို့နဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ကို ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်း အခြားနိုင်ငံများရဲ့သမိုင်း စတာတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ကျင့်ကြံတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အပေါ်က ချပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ ရွှေရည်စိမ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ တစ်မူး တစ်ပဲ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ အဲဒါကို ကျပ်ပြည့်အောင် သယ်ဆောင် ဖြည့်တင်းသွားဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားပဲဖြစ်တယ်။ အရိုးများသလေး ချေးခါးသလေး လုပ်နေရင် လုပ်တဲ့သူတင် နာတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကို ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်ထားတဲ့သူတွေမှာ ပိုပြီး နစ်နာတယ်ဆိုတာလောက်တော့ သဘောပေါက်သင့်တယ်။”
ပြောတာနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်ဖို့ တော်တော်လိုသေးတယ် တစ်ခါက ဓာတ်ဆီဆိုင်ပိုစ့်တစ်ခုမှာ မန်းထားတာတွေခဲ့တယ် ဘယ်သူမန်းတာလဲတော့မသိတော့ဘူး “မူကကောင်းတယ် လူကမကောင်းဘူး မကောင်းတဲ့လူတွေက ပြည်သူတွေထဲကပဲဖြစ်နေတယ်” တဲ့ အဲ့ဒီစကားက ခုတလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ကိုက်နေတယ် စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာ..
ထပ်တင်ပေးတဲ့ သဂျီးမင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြည်သူတွေထဲက နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူတွေကလဲ ပြည်သူ့အကျိုးကို ပါတီအကျိုးထက်၊ ကိုယ့်အတ္တထက် ပိုပြီးထားကြဖို့နဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ကို ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်း အခြားနိုင်ငံများရဲ့သမိုင်း စတာတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ကျင့်ကြံတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ဆိုတဲ့ အရေးအသားကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်၊ အတိုက်အခံပါတီတွေထဲမှာပဲ ကျွေးတာယူ၊ ပေးတာစားပြီး ပြည်သူတွေအကျိုးထက် မိမိတို့ အကျိုးကို ရှေ့ရူ့ပြီး လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်၊ ဒီပိုစ့်ကို ကျမအခုမှ ဖတ်ဘူးတာပါ၊ တင်ပေးတဲ့ သဂျီးမင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းမှာ သမ္မတကြီးက သူ့သမီးကိုစာသင်ပေးတဲ့ဆရာကိုပြောတာက
အလုပ်ကို သာမန်လူတွေထက် ပိုလုပ်ရမယ်တဲ့ သူက ဒီနိုင်ငံမှာ လစာအများဆုံးယူထားတဲ့လူပါတဲ့
City Hunter ဇာတ်ကားမှာ
တို့ တိုင်းပြည် မှာ အရည် အချင်း အမြှော်အမြင် နဲ့ ပြည်စုံ တဲ့ ခေါင်းဆောင်းကောင်ပဲ လို တာ၊ နောက် လိုက်ကောင်းတွေ အများကြီးပဲ။
စစ်တပ်ကို ပဲ ကြည့်ပါ လား အဲ လောက်ေ-ာင့်ကျင့် မကောင်းတဲ့ စစ်တပ်ထဲ ကို ဆယ်တန်း အောင်တာ နဲ့ စစ်ဗိုလ် ၊ ဆေးဗိုလ် ဖြစ်ချင်လို့ ဆို ပြီး ငွေပေးပြီး တောင် ၀င် ကြတယ်။
တကယ်ကို ပြည်သူ အကျိုး လိုလို လားလား နဲ့ တိုင်းပြည် တိုးတက် အောင် သာ လုပ် ခုလို အကျိုးလိုလားပြီး ငွေပေးဝင် တဲ့ သူ အပြင် ၀ါသနာ ပါ သူ တွေ ပါ စစ်တပ် ထဲ အများကြီး နေ မှာ။
အပေါ်ကချပေးတာကို ယူရုံဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လည်း
အင်္ဂလိပ်ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ဖို့ သက်စွန့်ဆံဖျား ဂျပန်သွား စစ်ပညာသင်စရာမလိုပါဘူး..။
အဲဒီတုန်းကလည်း အင်္ဂလိပ်က ချပေးထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့၊ လွှတ်တော်နဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးပါတယ်..။
အင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ ရာထူးယူတဲ့သူတွေနဲ့ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကိုယူချင်တဲ့သူတွေ ကွဲကြသေးတာပါဘဲ..။
ဂျပန်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၉၄၃ မှာ လွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့တာပါဘဲ…။
သူတို့ပေးတာ ယူရုံပါဘဲဆိုရင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်စရာ ဘာလိုသေးလဲ…။
ဟစ်တလာ၊ ပီနိုချေး၊ စပိန်အာဏာရှင် ဖရန်ကိုတို့ဟာ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး…။ သူတို့လို တရားမဲ့သူတွေ အင်အားကြီးမားတာ အမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူး…။
လောလောဆယ်မှာဘဲ အာရပ်ကမာမှာ မတရားတဲ့စနစ်တွေကို ပြည်သူတွေခေါင်းငုံ့မခံဘဲ တော်လှန်နေကြပါပြီ…။ အပေါ်ကချပေးတာယူရုံဘဲဆိုရင် ဘာတော်လှန်စရာလိုလဲ..။
ပေးတာယူ၊ ကျွေးတာစားတာ ခွေးတွေ၊ နွားတွေအဆင့်ပါ..။
လူဆိုတာ အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားတတ်တယ်..။ ကောင်းတာဆိုးတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်..။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ အင်္ဂလိပ်ဆီက လွတ်လပ်ရေးယူတာ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို တခဲနက် စည်းလုံးညွှတ်အောင် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကျိုးပမ်းခဲ့လို့ပါ..။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ တစ်သံတည်းထွက်နိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်..
မကောင်းမွန် မမျှတတဲ့စနစ်က လွတ်မြောက်ပြီး ကောင်းမွန်မျှတတဲ့စနစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ..။
ပြည်သူအားလုံးစိတ်ထဲကလည်း Thanlwinoo တွေးသလိုတွေးမှာပါပဲ။ ခုထိကျွန်တော်တို့စိတ်တွေက သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ကအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ထင်နေတုန်းပဲ။
ဒါပေမယ့် အချက်အလက်အရ ဆိုရင်တော့ စာရေးသူ (မင်းကျောင်း) ရေးတာက သဘာဝကျပါတယ်။ အင်းအားကြီးမားလွန်းတဲ့ အရှိန်တစ်ခုကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ဆိုတာ စိတ်သာရှိပြီး မလွယ်ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းပစ်ဖို့် စဉ်းစားသင့်တယ်။
နည်းလမ်းမကျတာ၊ မတရားတာ မှန်းသိသိနဲ့ မျက်နှာချိုသွေးပြီးနေဖို့ အလွယ်တာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းပေါ့လေ။ ဖြစ်နိုင်တာကို စဉ်းစားရမယ်လေ။
Political leaders should have clear and precise aim and objectives . They can change the emotional mine-set of the myanmar people.